Iiraan oo la sheegay in Hubka ay u waddo Xuutiyiinta ay usoo Mariso Xeebaha Soomaaliya. | Entertainment and News Site
Home » News » Iiraan oo la sheegay in Hubka ay u waddo Xuutiyiinta ay usoo Mariso Xeebaha Soomaaliya.
daajis.com:-Khamiistii Todobaadkan Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa Dowladda Iraan ku eedeeyay in Hub ay u gudbiso Xuutiyiinta Yemen iyada oo mar siineysa Biyaha Soomaaliya.
Xukuumadda Washington ayee sheegtay Nikki in aysan aqbali doonin in Dowladda Iiraan ay Gantaalo u gacan galiso Maleeshiyaadka Xuutiyiinta iyo waxa ay ugu yeertay Argagixisada.
Tahriibinta Hubka ee Kooxda Xuutiyiinta ayee ku sheegtay in dhanka Xeebaha loosoo mariyo sida ay hadalka u dhigtay.
Hubka loo wado Yemen ayaa la sheegay in aanan si toos ah loo gelin, balse loosoo mariyo Xeebaha Soomaaliya si looga dhigo badeeco Soomaaliya u socota, kadibne loo leexiyo Yemen sida Sawir lasoo bandhigay ka muuqata.
Ciidamada Faransiiska ayaa 15-kii November gacanta ku dhigay Dooni hub usoo watay Soomaaliya, waxayna sheegeen in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi ay kasoo iibsatay Iiraan, kadibne soomaaliya loosoo qaaday sida sheegeen Ciidamada Faransiiska.